Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.5 New ụzọ nke ịjụ ajụjụ
Omenala nnyocha ndị e mere na-emechi, agwụ ike, wepụkwa ya n'ebe ndụ. Ugbu a, anyị nwere ike ịjụ ajụjụ ọzọ agbakwunyere na ndụ, ihe na-emeghe, na ndị ọzọ fun.
Mkpokọta nnyocha e mere njehie kpuchie na-agba ume na-eme nnyocha na-eche banyere nnyocha e mere nnyocha dị ka a abụọ akụkụ usoro: ew zaghachirinụ na-ajụ ha ajụjụ. Na aga ngalaba m tụlere otú dijitalụ afọ agbanwe otú anyị n'oru zaghachirinụ, na ugbu a, m ga-ekwu otú dijitalụ afọ enyere ọhụrụ ụzọ jụọ ajụjụ. Ọhụrụ ndị a na-eru nso nwere ike ji mee na ma puru omume samples ma ọ bụ na-abụghị ihe gbasara nke puru samples.
Otu nnyocha e mere mode bụ gburugburu ebe obibi nke ndị a jụrụ ajụjụ, ma o nwere ike dị mkpa metụtara on mmesho (Couper 2011) . Ke akpa oge nke nnyocha e mere nnyocha kasị nkịtị mode bụ ihu na ihu, na nke abụọ oge kasị nkịtị mode bụ ekwentị. Ọtụtụ ndị nnyocha na-ele atọ oge nke nnyocha e mere nnyocha dị ka nanị otu ihe mgbasawanye nke nnyocha e mere na ụdịdị na-agụnye kọmputa na mobile phones. Otú ọ dị, dijitalụ afọ bụ ihe karịrị nanị a mgbanwe ke ọkpọkọ site na nke ajụjụ na azịza asọpụta. Kama nke ahụ, oge mgbanwe site analogue na dijitalụ na-enyere-na ga-abụ na-achọ-eme nnyocha ịgbanwe otú anyị na-arịọ.
Otu nnyocha Michael Schober na ibe-egosi uru ndị ukpụhọde anyị ajụ ka ike na-elekọta mmadụ norms gburugburu ọhụrụ teknụzụ (Schober et al. 2015) . Na-amụ, Schober na ndị ọrụ ibe tụnyere dị iche iche na-eru nso maka arịọ ndị mmadụ ajụjụ site na ekwentị mkpanaaka. Ha tụnyere olu mkparịta ụka, nke gaara a eke translation of abụọ oge na-eru nso, ka obon data site na ọtụtụ ederede ozi, na-abịaru nso na-enweghị doro anya nweela. Schober na ndị ọrụ ibe chọpụtara na texting mere ka elu mma data karịa olu ajụjụ ọnụ. Yabụ, naanị ebufe ochie na-eru nso na na nkà na ụzụ ọhụrụ bụ ihe kasị eme. Kama nke ahụ, na-eme nnyocha ga-hazie anyị ụzọ nke na-arịọ na-ọhụrụ ndị a nyiwe.
E nwere ọtụtụ akụkụ ndị a na-eme nnyocha nwere ike categorize nnyocha e mere ụdịdị, ma ihe kasị dị oké egwu ikpehe dijitalụ afọ nnyocha e mere ụdịdị bu na ha bu kọmputa-ndinọ, kama interviewer-ndinọ (dị ka na ekwentị na ihu na ihu, nnyocha). -Ewere mmadụ interviewers nke data collection usoro awade nnukwu uru na-ewebata ihe ndọghachi azụ ụfọdụ. Na okwu nke uru, wepụ interviewers n'ụzọ dị ịrịba ama ebelata akwụ ụgwọ-ajụjụ ọnụ bụ otu n'ime ndị kasị mmefu na nnyocha e mere nnyocha-na enwekwu mgbanwe; zaghachirinụ nwere ike ekwu okwu mgbe ha na-achọ, ọ bụghị naanị mgbe ihe interviewer dị. Otú ọ dị, wepụ interviewer na-egbochi nnyocha ndị e mere na ụzọ ụfọdụ. Karịsịa, interviewers bụ oké egwu na-agba ume zaghachirinụ na-ekere òkè ma na-eburu ha na-emekwa ụfọdụ mgbe slogging site ogologo na mgbe ụfọdụ tedious nyocha.
Next, Aga m na-akọwa abụọ na-eru nso na-egosi otú na-eme nnyocha nwere ike iri uru nke ngwaọrụ nke dijitalụ afọ ịjụ ajụjụ dị iche iche: e ji atụ esịtidem na-ekwu na a ọzọ kwesịrị ekwesị oge na ebe site ebe obibi nwa oge ntule (Nkebi 3.5.1) na ijikọta-eme nke open-biri na nso-biri nnyocha e mere ajụjụ site Wiki, nnyocha (Nkebi 3.5.2). Otú ọ dị, ahụ ha kwagara na kọmputa-ndinọ, ubiquitous ajụ ga-apụtakwa na anyị kwesịrị chepụta ụzọ nke ajụ ndị na-atọkwu ụtọ maka sonyere, a usoro a na-akpọ gamification (Nkebi 3.5.3).